The Best ihe na-eme na London na Olee otú Iji Nweta E | Save A Train
Home > Train Travel UK > The Best ihe na-eme na London na Olee otú Iji Nweta E
The Best ihe na-eme na London na Olee otú Iji Nweta E
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Britain, Train Travel UK
(Emelitere ikpeazụ On: 17/04/2020)
Mgbe ọ na-abịa eleta Europe kasị ama n'isi obodo, London bụ ịrụ ụka adịghị na n'elu bụla njem nleta si chọrọ ndepụta na e nwere ọtụtụ ihe na-eme na london. Ọ na-nwetara a ogologo, adọrọ mmasị mere na; mara mma akara na nlegharị anya; na e nwere ihe ọtụtụ ihe na-eme ebe ahụ. Ma ị na-ihe dị mfe na aga njem nleta onye chọrọ ga-esi mara obodo omenala, ma ọ bụ ihe onye njem na-achọ obi ụtọ, London nwere ihe na-echere ihe ị.
N'ezie, ndị ọzọ karịa maara banyere ihe na-eme na London, ọ dịkwa mkpa ka chepụta lọjistik nke njem gị. Inweta e ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ndị kasị eke nhọrọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị si isi European obodo ndị dị ka Paris, Amsterdam, ma ọ bụ Berlin. Ebe a bụ ihe nnyocha nke London na-eme na ụgbọ okporo ígwè ga-enyere gị Akpara gị ezumike:
Anyị mmasị ihe na-eme na London
Na a obodo dị ka nnukwu dị London, ibelata ala ndepụta nke na-eme ka a ole na ole nhọrọ bụ fọrọ nke nta agaghị ekwe omume. Ọ dịghị mgbe ị ga-ahụ ihe niile na nlegharị anya na enwetaghị niile authentic London ahụmahụ n'otu nnọkọ. Ọ bụ ya mere anyị nwere ike ikwu mwube gị na-ebute ụzọ tupu.
N'ihi na ndị ị na-achọ ihe na-eme na london na-metụtara shopping, dị iche iche na ahịa ga- mata gị nleta. Ị na-achọ authentic, obodo nri? Lelee Borough Market na ịlele ya gastronomic utọ, ma ọ bụ iri na otu nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị nso. Ọ bụrụ na ị na-na na ọzọ na ọnọdụ maka ụfọdụ ngalaba ụlọ ahịa na ụlọ ahịa, Liberty bụ a akwa ebe. Nhọrọ, gaa achụ nta ụfọdụ jụụ antiques na Portobello Road Market.
Ọ bụrụ na gị na njem na London nwere ihe nke agụmakwụkwọ agwa, gaa na ụfọdụ nke omenala hotspots nke obodo. Site ịga nwughari nke Shakespeare Globe na-amụta banyere Tower nke London, ị ga-enwe ime. Anyị na-na-na-akwado na-ekpori ndụ dịkọrọ ndụ art na Tate Modern na South Bank, nakwa dị ka ịga na Southbank Center.
Utrecht na London Ụgbọ oloko
Antwerp na London Ụgbọ oloko
Strasbourg na London Ụgbọ oloko
Luxembourg na London Ụgbọ oloko
Na-na London site Train si Paris, Amsterdam, na Berlin
Ị nwere ike iru London si Paris, Amsterdam, na Berlin mfe via Eurostar, Intercity na Thalys ụgbọ oloko. Ụfọdụ ndị na-amalite ebe ga-enwe a ọzọ eke ụzọ nke iru London karịa ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, i nwere ike ịbanye a Eurostar elu-ọsọ kpọmkwem ịzụ ka London si Paris, na-ahụ na a obere ihe karịrị abụọ na ọkara awa.
Mgbe ọ na-abịa njem na London si Amsterdam na Berlin, si Amsterdam, i nwere ike na-Eurostar iduzi ma ọ bụ ọzọ ezi nhọrọ ga na-akpa-esi na-Brussels via Thalys na mgbe ahụ banye Eurostar na Brussels na London. The njem ewe ihe awa anọ na ụzọ na bụ ihe ndị kasị ụzọ iru London si Amsterdam ụgbọ okporo ígwè.
Na-na na UK isi obodo Berlin ụgbọ okporo ígwè ga-achọ mgbanwe abụọ. The ngwụsị nke njem bụ otu ihe ahụ dị ka si Amsterdam, na mgbe ahụ na-abanye Eurostar. Otú ọ dị, ọzọ nhọrọ bụ ịzụ njem site si Berlin na Cologne, ebe ị ga- banye a ụgbọ okporo ígwè na Brussels. ọ bụ ndị kasị ụgbọ okporo njem site Berlin na London na-ewe a obere obere mgbe 10 awa na ị pụrụ ime ihe nile ihe ị mụtara banyere ihe na-eme na london.
Amsterdam na London Ụgbọ oloko
Rotterdam na London Ụgbọ oloko
Brussels na London Ụgbọ oloko
Jikerela na London?
Ọ bụrụ na ị kpebiri ihe ọkacha mmasị gị ihe na-eme na London ga-, gị na mkpa iji mee ka njem! Inweta e ụgbọ okporo ígwè dị mfe, Ya mere, gaa na akwụkwọ gị oche maka a mma ezumike.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-things-to-do-london%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / es ka / de ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#njem europetravel London Train Travel uktravel
10 Fairytale-ulo-ikwū Na Italy Ị Ga Gaa Leta
10 Kasị adọrọ mmasị Train Stations Na Spain
Njem ụgbọ oloko, Ingbọ ologo Spain
Ebe Obi Totọ Gaa Leta Na Nchọpụta Onwe Gị
12 Ọtụtụ Ugwu Mara mma Na Europe
10 Ebube LGBT Enyi na Enyi